မိန်းကလေးတွေကို ဝီစီမှုတ်ခိုင်းမယ် … တဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မိန်းကလေးတွေကို ဝီစီမှုတ်ခိုင်းမယ် … တဲ့
မိန်းကလေးတွေကို ဝီစီမှုတ်ခိုင်းမယ် … တဲ့
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Feb 6, 2012 in Myanma News, News | 43 comments
မှတ်ချက် ။ ။ ယနေ့ထုတ် Envoy ဂျာနယ်တွင် ပါရှိသော သတင်းတစ်ပုဒ်အား Scan ဖတ်၍ တင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကားစီးရင်း ၀ီစီသံကြားရင် ရီတော့ရီချင်စရာကြီး..ဟီး.ဟီး.ဟီး..
ကျုပ်ကတော့ ၀ီစီသံကြားတာနဲ့ပြေးပြီး ဆွမ်းကြီးလောင်းဖို့လယ်ဒီပဲ
အဲတာကြောင့် ရမ်းသမ်းလဲ မမှုတ်ကြနဲ့ ဦး…
အသံကြားတာနဲ့ပြေးတွယ်ပြစ်မယ်..ဘေးထောက်လှမ်းရေးတွေ..
သများတို့ဝီစီမှုတ်ရင်လဲ လာကယ်ကြဘာနော်..
လူမှားပြီး ဆွမ်းကြီးလောင်း ခံရရင်ရော ….
ဘာပြန်မှုတ် ရမလဲ ဟင်င်င်င်င်………….
၀ီစီရှင်နား သွားရပ်မိရင်လဲ ဒုက္ခ
အသာလုပ်ကြပါ အာစိတို့ ရေ
၀ီစီမှုတ်သံမြင်ယောင်ပြီး အူတက်အောင် ရီချင်လာဘီ
အဲဒီ အစီအစဉ်ကို တင်ပြသူကတော့ ရွှေဉာဏ်တော် စူးရောက်ပါပေ့ဗျာ … နော့ ..
တော်ကြာမော်တော်ပီကယ်မှုတ်တဲ့ဝီစီဖြစ်နေအုံးမယ်။ အဲဒါမှတေပီချာဖြစ်နေအုံးမယ်။ သေချာနားထောင်နော်။ မှားမယ်မှားမယ်။
ကျနော်တို့ ယောက်ျားသားကောင်းတွေကို Gay တွေက
လာရောက် အိန်ဒရေထိပါးလာရင်ကော ဘတ်စကားပေါ်မှာ
ဘာ… ဂျာ မှုတ်ရမလဲဟင်…
မာမီပေါက်ရေ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝယ်ဆောင်ထားလေ သူတို့ဝေတဲ့ဝီစီက
စိတ်ချ အသံကြားရင်တော့ တွေ့တဲ့လူ သမပြီပဲ
အူတူတူလုပ်နဲ့ ..မှုတ်လိုက်မှာ …ရွှီး..ရွှီး..ဆိုပြီးတော့
ဟဲ့ဟဲ့ ၀က်ခေါက်ရောင်းတဲ့ ပေါက်ဖော် ဖင်လာနှိုက်နေပါတယ် ရှင့်
အောင်မငီး … ဝီစီသံတွေ ညံစီနေပါလား …
တော်တော် အမှုတ်ကောင်းတဲ့ ဟာတွေ … ဟီဟိ …
သူဝီစီ မူတ်လိုက်တဲ့ အချိန် ကိုယ်က သူ့အနားတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရောက်နေရင်တော့လား….
ကားစီးရင်စပါယ်ယာနောက်ပဲတကောက်ကောက်လိုက်နေပေါ့။ အဲဒါဆိုအန္တရာယ်ကင်းလောက်မယ်မှတ်တာပဲ။ ဟီဟိ။
အမျိုးသမီးတွေ ကားပေါ်တက်တာနဲ့ ပါးစပ်မှာ ၀ီစီလေးတွေနဲ့၊ တွေးကြည့်ရင်း ရယ်ချင်လာပြီ။ ကားတစ်ချက် ဘရိတ်အုပ်လိုက်တာနဲ့ ဆူညံနေတော့မှာပဲ…. စုတ်ခ…စုတ်ခ…. ကြည့်လဲလုပ်ကြပါအုံးဗျာ… ကူညီမှုတွေများပြီး ဆူပူမှုဆိုရင်တော့ ……. သတိလဲထားကြပါအုံးဗျာ… တားတားတော့ ရန်ကုန်ကို မလာတော့ဘူး….တားတားကျောက်ကျောက်
လောက်ပါဘူးနော်။ခဏနေ ယဉ်ထိန်းနဲ့ မှားနေမှ ဒုက္ခပါလား
ကြိုတွေးပြီး ရင်လေး မနေပါနဲ့ဗျာ။ တော်ကြာ စိတ်ကူးထဲ ဘယ်ကောင်က လာဗျင်းသွားမှန်း မသိဘူး ဖြစ်နေပါဦးမယ် … နောက်တာနော် … စိတ်ဆိုးနဲ့ …
ဂျာနယ်ထဲ ပါလာတဲ့ သတင်းပါဗျာ။ ရန်ကုန်မှာပဲ လုပ်ဖို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်လို့သာ အဲဒီ အစီအစဉ် အကောင်အထည် ပေါ်ခဲ့ရင်တော့ တော်တော့်ကို ရီစရာ ကောင်းမှာ…
“ဘတ်စ်ကားပေါ်က သများတွေရန်က လွတ်အောင်ရော.ဘယ်လိုများစီစဉ်ပေးမယ်မသိ” .. တဲ့။ အောက်မှာ TNA ကတော့ အကြံပေးထားတယ် စပါယာနောက် တကောက်ကောက် လိုက်ပေါ့တဲ့ ။ အင်း … စပါယာနောက် တကောက်ကောက် လိုက်လို့ကတော့ မြင်ယောင်သေးတယ် …
တိုတိုရယ် … ။ ရန်ကုန်ကိုတော့ လာဘဲ နေပါနဲ့နော်။ တိုတို ဆိုရင်တော့ သများက မှုတ်ပါဘူး … နော်လို့ …
အတိသဉ္ဇာ နာဂရ ချစ်သူ …
ကားသမားတွေ တော်တော် စိတ်ညစ်စရာကောင်းမယ့် အပေါက်ဗျ … နော့ …
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ
သများက နဂိုထဲက မှုတ်ချင်နေတာနော် (၀ီစီ..)
တရားဝင်မှုတ်ခွင့်ပေးရင် မော်တော်ပီကယ်တောင် ဆလံပေးသွားရလိမ့်မယ်..
ပြောပြန်ရင်လဲ ဒေါ်စိန်ပေါက် လွန်ရာကျဦးမယ်တော်
လိုင်းကား လုံလုံလောက်လောက်ထုတ်ပေးဖို့ မတောင်းဆိုကြပဲ ၀ီစီမှုတ်ဖို့ ပဲ စဉ်းစားနေကြတယ်.ဥာဏ်ကြီးရှင်တွေရေ
မှန်ပါတယ် အခြေနေတစ်ခုပေါ်မှာ မိန်းကလေးတွေ မှုတ်သင့်ပါတယ် ( ဝီစီ ) ဟဲဟဲဟဲ
လက်တွေ့ကျကျ မှုတ်ဘို့ အကြံပေးတာ တစ်ယောက်ဘဲရှိဘူးပါတယ်
ဖြစ်ခြင်တာရယ် ဖြစ်နေတာရယ် ဖြစ်သင့်တာရယ်
များတော့မှုတ်တော့ပါဘူး သူဒီထက် ပိုပြီး ဘာမှလုပ်လို့မ မရတာ သူဒေါသနဲ့သူ မရိုးမရွနဲ ၀တ်ခံနေရမှာလေ
အဲလိုစိတ်များ တဲ့ ပူရိသ တွေ ကြီးလာရင် အခြောက် ဖြစ်သွားတတ်တယ် ယောက်ကျားချင်း သူက ပြန်ပွတ်
ပေးရတဲ့ ဘ၀နဲ့ ၀တ်ပြန်လည်ရော
ထင်ရောင်ထင် မှားတော့အဖြစ် မခံနိုင်ဘူး။ ခုံလွတ်တာနဲ့ ဘယ်သူ့ မျက်နှာမှ မထောက် ဇွတ်လုထိုင်မှ ဖြစ်
ကွန့်မန်တွေ ဖက်ပြီးတော့ အရမ်းရယ်သွားပါတယ်
ခေတ်မှီအောင် (၀ီစီလေး) ကိုင်ပြီ ကားစီးကြည်အုံးမှပဲ
မနို ရဲ့ အသိအမကြီးတစ်ယောက်ကတော့ ဘတ်စ်စကားစီးရင်
တိုက်ချိတ်လို့ ခေါ်တဲ့ 3လက်မလောက်ရှိတဲ့ ချိတ်တစ်ချောင်း အမြဲဆောင်ထာပါတယ်
အဲ့ဒီအကြံလေးလည်း ကောင်းသားပဲ … ။ ခါတော်မှီ ၀ီစီရောင်းစားလျှင် ကောင်းမလား ..
ပြောမယ့်သာပြောရတာ … စုန်းပြူးတွေကလည်း ပါတော့ … တကယ် အရေးကြုံမှ မှုတ်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ … အချင်းချင်း စချင်နောက်ချင်လို့ မှုတ်ကြမယ်ဆို … ဒီနည်းလည်း နောက်ပိုင်း အသုံးဝင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး … ။
တကယ်ဆိုဘာဝီစီမှတောင် မလိုအပ်ဘူး … ။ ကိုယ့်အပေါ် အမြတ်ထုတ် ၊ အသားယူချင်တဲ့ တဏှာရူးနှာဘူးတွေ နည်းနည်း ထိပါးလာတာနဲ့ … အသံထွက်ပြီး ပြောလိုက်တာမျိုး .. အသံတိတ်ဒေါက်ဖိနပ်နဲ့တွယ် ၊ တံတောင်နဲ့တွယ်လိုက်တာမျိုး လုပ်သင့်တာ .. ။ ကိုယ်လုပ်ခံရတာကို ..ပြန်မပြောရဲအောင် ရှက်နေလျှင် .. အသံထွက်ရမှာ ရှက်နေလျှင်တော့ … ကိုယ့်ထိုက်နဲ့ ကိုယ့်ကံပေါ့လေ … ။
မတရားတာကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့က ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး … သိသိကြီးနဲ့ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတာမျိုးကမှ သိမ်ဖျင်းလွန်းရာ ကျတာပါ … ။ အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျော့ညံ့ညံ့အဖြစ်မမှတ်ယူပဲ … စိတ်ဓါတ်ပြင်းပြထက်မြက်သူများ ၊ မတရားမှုကို ငုံ့မခံတတ်သူများ ဖြစ်ကြပါစေနော် … ။
မမအိတုံပြောတာကို ကျနော် ထောက်ခံတယ်
စီးပွားရေးသိပ်မြင်တာဘဲနော် ( ဘဲဘဲကတော့ ကံကောင်းတာဘဲ )
တစ်ခါတစ်လေကြတော့လည်း အိနြေ္ဒဆိုတာက သတ်သတ်ပါ
အဲ့သည်လိုဘဲ ငြိမ်ခံကြလို့ အတင့်ရဲလာကြတာဘဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော
ကိုယ့်ကို ဟဝါလာပြုရင် ဘုကျကျပြန်ကြည့်တာတို့
ကိုယ်ကိုလှုပ်ပြီး ပြန်စောင်းကြည့်တာတို့ လုပ်ပြစ်သင့်တယ်
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဒီလို မတော်မတရားပြုနေတာကို
အပေါ်က အောင်ပုဆိုတဲ့ လူကြီးက ဘာကြောင်တာလဲသိဘူးနော်
တချိန်က ရန်ကုန် မှာ ဟွန်းမတီး ရ ဆိုပြီး စ လုပ်တဲ့ အချိန်တုန်းက အဖြစ်အပျက်လေး သတိရမိတယ်။
လိုင်းကားတွေပေါ်မှာ ကားစပယ်ရာတွေ က ၀ီစီ ကိုယ်စီနဲ့ အပြိုင်မှုတ်ကြတာ။
အခုဝီစီမှုတ်ဖို့အတွက်ပညာပေးကာလမှာဗော်လန်တီယာတွေစခေါ်နေပြီနော်။ အယောက် ၅၀ တဲ့။ ရွာထဲကစိတ်ဝင်စားသူတွေလျှောက်နိုင်ပါတယ်။ လည်ပင်းမှာဝီစီလေးဆွဲလို့။ တတွီတွီနဲ့ပေါ့။ ဟီဟိ။
၀ီစီရောင်းလျှင် နားထဲ စို့ထားဖို့ နားကြပ်ပါရောင်းရမယ် .. မဟုတ်လျှင် နားကွဲမယ် .. အဲ့ဒီအသံနဲ့
အောင်မယ်လေးစီးပွားရေးချည်းပဲ။ ၀ီစီရောင်းလိုက်၊ နားကြပ်ရောင်းလိုက်နဲ့။့ ပိုက်ဆံစုနေတာလားအိတုန်ရေ။ ဘာ့တွက်ပါလိမ့်။ ဟဲဟဲ
Thel Nu Aye က သိဝူးထင်တယ် …
အနော် ကြောလိုက်ရမလား မအိတုံ …
ဘာဖျစ်လို့ ပိုက်ဆံစုနေတယ်ဆိုဒါ …..
စီစဉ်သူများ ရွှေဉာဏ်တော်စူးရောက်ပါပေ့။မိန်းကလေးတိုင်း ကားစီးရင်ချိတ်စောင့်ဖို့ တိုက်တွန်းတာမှ ပိုထိရောက်အုန်းမယ်။:)
လမ်းမပေါ်မှာ ပစ္စည်းလုပြေးတာတို့ ပန်းခြံတွေမှာ တစ်ခုခုဖြစ်တာတို့ဆို တစ်မျိုးသွားဦးမှာ
ငါတို့ဘ၀ကတော့ဒုက္ခပါပဲ အလုပ်သွားရင်ပုဆိုးနဲ့လက်တစ်ဖက်ကလည်းမအားနဲ့ 
တိုတိုတော်ဘလာ က လူဂျိုကြီး လုပ်မှာလားဟင် …
မိန်းမမြင်ရင် ဝေါင်ဝေါင်ရှေးမယ် ချိုဒေါ့ …..
အကောင်အထည်ဖေါ်တာတယ်မြန်သကိုး………..မနေ့ကရုံးမှာ ညီမလေးတွေ ရုံးတက်တော့ လက်ထဲမှာ 150 တန်ကော်ဝီစီလေးတွေ ကြိုးတွဲလောင်းတွဲလောင်းနဲ့ပါလာတယ်….မေးကြည့်တော့ သူတို့ဟာသူတို့ ရုံးဖယ်ရီစောင့်နေတာကို ကားဂိတ်မှာ အမကြီးတွေ အုပ်စုလိုက် လိုက်ဝေနေတာတဲ့………………ဒါနဲ့ ညည်းတို့တစ်ကယ်ဖြစ်ရင်မှုတ်ရဲလား(ဝီစီကိုပြောပါဒယ်) လို့ သူတို့ကိုမေးကြည့်တော့ “ဘယ်လိုလုပ်မှုတ်ရဲမှာတုန်းကိုကြီးရ” …………. အင်း……ဆက်ကြည့်ရဦးမယ်…………
Akhaya Women (အခရာ အမျိုးသမီး အဖွဲ့) က ဖေဖော်ဝါရီ (၇) ရက်နေ့ကစပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း အယောက် ၅၀၀ နဲ့ အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့တာလို့ သိရတယ် ခင်ဗျ …။
အခုမှတွေ့ တယ်..ကူးပြီးဟာသနဲ့ တွဲတင်လိုက်မယ်ဗျို့ 